Fa maninona i Valeria Copponi? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Ny tantaran'i Valeria's Copponi momba ny fandraisana toerana avy any an-danitra dia natomboka fony izy tao Lourdes niaraka tamin'ny vadiny miaramila tamin'ny fivahinianana masina. Teo izy dia nandre feo iray izay nofantariny ho anjeliny mpiambina, nilaza taminy mba hitsangana. Natolony an'i Our Lady avy eo, izay nilaza hoe: "Ianao no ho cenacle" - teny izay vao azony taona maro taty aoriana rehefa nampiasa azy io ny pretra iray tao anatin'ny vondrom-bavaka natombony tany an-tanànan'ny tanànan'i Roma, Italia. Ireny fihaonana ireny, izay nandefasan'i Valeria ny hafatra nataony, dia notanterahina indroa isam-bolana tamin'ny alarobia, avy eo isan-kerinandro tamin'ny fangatahan'i Jesosy, izay nolazainy fa tsofa tao amin'ny fiangonana Sant'Ignazio mifandraika amin'ny fihaonana amin'ny Jesuit Amerikanina, Fr. Robert Faricy. Ny fiantsoan'i Valeria dia nohamafisin'ny fanasitranana isan-karazany maro, ao ny iray avy amin'ny sclérose marobe, izay nahitana ny fahagagana tao Collevalenza, ny 'Italiana Lourdes' ary ny tranon'i Espaina Andriamatoa Speranza di Gesù (1893-1983), ankehitriny beatification.
Hafatra avy amin'i Valeria Copponi
Fa aloha, hiseho tampoka ny fitsapana ...
ho avy, Ny fandriam-pahalemana, Jesosy, Mary, fialofana, hiverina, Triumph
Valeria - Manolo-tena tsy misy fisalasalana
Tsy manova ny fomban'Andriamanitra ny maizina.
fandaozana, aza matahotra, fileferana, fahatokiana
Valeria - Manampy amin'ny fisaintsainana ny fijaliana
Manapa-kevitra ny hanao soa ary handresy.
fanentanana, safidy, mifidy, ny tsy fankatoavana, mahatoky, famindram-po, taratra, mijaly, fakam-panahy
Tsy hisy afaka hiteny hoe: "Tsy fantatro".
fiaiken-keloka, Jesosy, fibebahana, tsy misy, fampitandremana
Mametaveta ny fo, Mary, Neny, fandriampahalemana, vavaka, fitsapana
Tonony amin'ny fonao ilay "fanekem-pinoana".
Izaho mino, fanekem-pinoana, finoana, vavaka, Triumph
Oktobra 11, 2020
ny mandrakizay, manantena, Jesosy, Neny, Ilay Reninay, vavaka, sorona
Valeria - Tsy izaho no manasazy
Ianareo no mitondra azy io.
hiampita, asa tsara, fanelanelanana, hatsaram-panahy, famindram-po, faharetana
Valeria Copponi - Raiso am-pahamatorana ny fiainana
Tsy mitantana intsony ianao raha mitady fotoana ho an'i Jesosy.
Valeria Copponi - Ny fiambenana nataonao dia tsy avy amin'Andriamanitra
Aprily 30, 2020
Aza lany andro amin'ny vaovao ratsy intsony.
Valeria Copponi - Tonga hampionona anao aho
Miaraka aminao aho, tiako ianao ary tsy handao na dia ny zaza minia tsy mankatò aza.
Valeria Copponi - Fodiana mody
Ireo fitsapana ho anao amin'izao fotoana izao dia fampitandremana fa, ho anao rehetra dia hisy fiovana.
copponi, adala, sapile
Valeria Copponi - Iray ihany ny Mpamorona
Eny, ny zanako, "Maranatha." Mivavaha - mivavaha - mivavaha ary tsy hiandry ela kokoa ny zanako.
Valeria Copponi - Ny finoanao no hamonjy anao
Misavoritaka ny tontolon'izao tontolo izao ...
Valeria Copponi - Ao amin'ny Times ianao
Ao anatin'ny "fotoana" ...
Valeria Copponi - Ny fahafatesana tsy tokony hanala tahotra
Tsy tokony hampahatahotra izany tahotra izany ny fahafatesana, satria Andriamanitrao no nanamboatra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Valeria Copponi - Tafio ny fiadianao
TOROHEVITRA TAMIN'ny 19 Mary, Renin'ny Fandresena Fandresena! Izaho no Reninao, izay avy any an-danitra ...
Valeria Copponi - Minoa ny herin'ny vavaka
Nalefa tamin'Andrimanitra 12 Febroary 2020, avy amin'Andriamanitrareo: Ry zanako malalako, raha eto ianao, dia satria manana ...
Mitomany anao ny reniko
Betsaka ny famantarana izay alefako anao, saingy tsy amin'ny fanomezana na amin'ny loza no tsy hain'ny maro aminareo.
Valeria Copponi - Mampiasà fitaovam-piadiana matetika
Navoaka tamin'ny 29 Janoary 2020, avy amin'iMary, Izy Izay Handresy: Ry zanako malala, mitondra ny fitahian'ny oloko aho ...
Valeria Copponi - Izy irery ihany no hanome anao tanjaka
Navoaka tamin'ny 22 Janoary 2020, avy amin'i Jesosy, Ilay Zanako vavy, Izaho no Izy izay hiverina eo afovoan ...
Valeria Copponi - Te-hanasitrana ny ratra mahazo antsika izy
Navoaka tamin'ny 15 Janoary 2020, avy amin'i Jesosy Mamindra fo, Zanako malala aho, ry Jesosy malala-tanana. Manana izany ianao ...
Valeria Copponi - Ondry tsy misy mpiandry
Navoaka tamin'ny 8 Janoary 2020, avy amin'i Mary, Nirahin'ny Zanaka: Ry zanako malala, avadika androany ny biraoko.
Valeria Copponi - nankinina amin'ny fon'i Jesosy Jesosy
Navoaka tamin'ny 2 Janoary 2020, avy amin'ny reninao any an-danitra: Ry zanako malala toy izao, atokoy ny fianakavianareo ao am-po masina ...
← FIZARANA 1: Fr. Michel Rodrigue:…
Fa maninona i Luz de Maria de Bonilla? →